Iibhokisi ezintlanu zeTV ezine-Android kulo lonke uhlahlo-lwabiwo mali Iindaba zeGajethi
I-Android TV BOXs yimveliso edumileyo, kwaye zimbalwa iimveliso ezisungule umabonakude onobuchule onokusetyenziswa ngokwenyani. Ibhokisi yeTV ene-Android isivumela ukuba sithathe yonke inkululeko esiyithathayo kwiifowuni eziphathwayo mihla le, kodwa kwintuthuzelo yesofa, esenza umabonwakude wethu abe sisilumko kangangoko.
Mhlawumbi yiloo nto esiba yimveliso ethandwa ngakumbi. Namhlanje sifuna ukukwenza ukudityaniswa ngeendlela ezintlanu kuzo zonke izinto ozithandayo kunye neepokotho, ukuze ukhethe eyakho ngaphandle kokukhangela kakhulu. Hlala nathi kwaye ufumanise ukuba zeziphi ezizezona zitshiphu zingcono ze-Android TV Box ezizezinye.
Ke, ngaphandle kokulibaziseka, siza kuqala ukukuxelela ukuba zeziphi iibhokisi zeTV ezibalaseleyo ezine-Android onokuzithengisa kwimarike.
1 UMSEBENZI V88 - 4K RK3229
2 IMecool M8s Pro L
3 Xiaomi mi Ibhokisi
5 Ichibi leVoo Apollo
UMSEBENZI V88 - 4K RK3229
Inkqubo: 3229 GHz Quad Core RK1,5
Siqala ngale Bhokisi yeTV ye-TV ebiza kakhulu, okwangoku ungayifumana kwi-euro ezingama-20 koku LINK, nangona ihlala iphakathi kwe- $ 50. Sijongene neBhokisi yeTV ye-TV esisiseko yoyilo olunomdla, kodwa eyilelwe ukuhlangabezana neemfuno zezona zincinci zifunwa, elungileyo, entle kwaye ngexabiso eliphantsi. Inazo zonke izibuko onokuzilindela ezinjenge-Ethernet, ii-UBS ezine, umfundi wekhadi le-SD kunye neziphumo zomsindo we-analog. Yibhokisi ngaphandle kwempumelelo eya kudibana neziseko.
IMecool M8s Pro L
Inkqubo: I-Amlogic s912 64-bit, ene-8 cores kunye ne-2,1 GHz
Nazi izinto eziqala ukufumana i-VIP encinci, sifumana i-3 GB ye-RAM kunye neprosesa ekufuneka ikwazi ukuqhuba uninzi lwezicelo kwiVenkile yeGoogle Play, kunye nokukwazi ukusasaza kwizisombululo ze-UHD ezingayi kuvumela akukho nto ingakhathaliyo. Olunye uncedo kukuba ngokomgangatho ihlaziywa ngokupheleleyo kuhlobo lwamva nje lwe-Android, eyehla amandla ayo.
Ilungile kwaye inomtsalane, Ine-Ethernet, uqhagamshelwano lwetshiphu emsebenzi, umfundi wekhadi, ii-USBs ezimbini kunye neziphumo zomsindo we-analog. Ungayifumana ukusuka kwi- € 45 in LONTO.
Inkqubo: ICortex A54 i-quad-core 2,0 GHz
Isigebenga saseAsia kwafuneka sibe nohlobo lwayo, ayinakuphoswa. Nangona kunjalo, kubonakala ngathi ayinanto xa kuthelekiswa nezinye, siya kufumana kuphela ukuphuma kwe-USB, ukuphuma komsindo we-analog kunye ne-HDMI. Ayinawo umfundi wekhadi kodwa ibandakanya ulawulo olukude oluza ngqo kwiphakheji yokwamkela. Ulawulo lukunika into ebalulekileyo yokudibanisa nentuthuzelo, nangona sihamba kuluhlu lwamaxabiso aphezulu. Ukuba nemveliso yesiqinisekiso seXiaomi inexabiso, ngakumbi ukusuka kwi- € 59 kwi LONTO.
Inkqubo: RKM 3229 i-quad-core 2,0 GHz
I-Rikomagic yifemi engaphezulu kwengcali kule panorama, ibonelela ngebhokisi yeTV yomgangatho oqinisekisiweyo, kwaye ngokobuqu inguye ondinike esona siphumo sihle. Kule mbhodamo sine-HDMI, i-Ethernet, ukuphuma kweaudio, ukuphuma kweaudio ye-analog, ii-USBs ezimbini kunye nomfundi wekhadi, ngaphandle kwamathandabuzo awuyi kuphoswa nayiphina into. Ngendlela efanayo, esi sixhobo sinendawo yayo ekude esinokuhamba kuyo ngokulula kwiBhokisi yeTV. Ungayifumana ukusuka kwi- € 27 in LONTO, elona xabiso libalaseleyo lemveliso yexabiso elisemgangathweni esikunika lona kuluhlu.
Ichibi leVoo Apollo
Inkqubo: I-Apollo Lake N3450 i-quad-core 2,2 GHz
I-GPU: I-Intel HD Graphics 505
Imveliso eyilelwe eyona inzima, kwizinto zepremiyamu ngakumbi kunye neempawu zobugcisa ezisivumela ukuba siyithathe njengeBhokisi yePC. Alithandabuzeki elokuba liziko lokuzonwabisa elinalo Windows 10 eya kukuvumela ukonwabela zonke iintlobo zomxholo, kuphela kwizona gourmets zehlabathi zibukelwayo. Ngokucacileyo ixabiso liyangena, ukusuka kwi- € 135 kwi LONTO.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Iibhokisi ezintlanu zeTV ezine-Android kulo lonke uhlahlo-lwabiwo mali
Eyona laser inamandla ehlabathini sele iqalile ukusebenza eHamburg